Uncategorized - Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बृद्धि
नयाँदिल्ली, मे ३१
भारतमा कोरोनाभाइरसका कारण संक्रमित हुनेहरुको दैनिक संख्यामा बृद्धि हुँदै गएको छ । अघिल्ला दिनहरुको तुलनामा पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा आठ हजार ३८० जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन् ।
योसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या एक लाख ८२ हजार १४३ पुगेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अघिल्ला दिनहरुमा दैनिक रुपमा संक्रमितहुनेहरुको संख्या यो भन्दा थोरै रहेको थियो । त्यसैगरी कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकाहरुको कुल संख्या पाँच हजार १६४ पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भारतमा देशभरी ८९ हजार ९९५ जना अझै पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेका छन् भने झण्डै उत्तिकै संख्या अर्थात् ८६ हजार ९८३ जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् । “तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा कुल सङ्क्रमित मध्ये ४७.७५ प्रतिशत सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्,” एक जना सरकारी उच्च अधिकारीले भने ।
कुल संक्रमितहरुको संख्यामा विदेशीहरुको संख्या पनि जोडिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भारतमा दर्जनौं नेपालीहरु पनि कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । शनिबार बिहानदेखि आइतबार बिहानसम्ममा भारतमा थप १९३ जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ९९ जनाको महाराष्ट्र राज्यमा मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी दोस्रो धेरै गुजरातमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने दिल्ली प्रदेशमा १८ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार मध्यप्रदेश र राजस्थानमा नौ, नौ जना, पश्चिम बंगालमा सात जना, तमिलनाडु र तेलङ्गानामा छ, छ जना, बिहारमा पाँच जना, उत्तर प्रदेशमा तीन जना, पञ्जाबमा दुई जना, हरियाणा र केरलामा एक एक जनाको कोरोनाका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको छ ।–रासस/पिटिआई
निषेधित क्षेत्र तोड्ने चिनियाँ पक्राउ
स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै सिंह दरबार अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका चिनियाँ नागरिक र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपमा परी महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबारका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत र एक प्रहरी जवान घाइते भएका छन् । यस्तै ६ जना चिनियाँ नागरिक पनि घाइते भएका छन् ।
लकडाउन उलङ्घन गरी निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्ने क्रममा झडप भएको सिंहदरबार प्रहरी वृत्तका प्रहरी निरीक्षक वेद पौडेलले जानकारी दिए । सिंहदरबार अगाडिबाट साढे ३ बजे करीब २५ चिनियाँलाई पक्राउ गरिएको हो । उनले निषेधित क्षेत्र तोडे सिंहदरबार आएर प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेपछि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए ।
ती नागरिकहरु घर फर्किन पाउनुपर्ने माग राख्दै ‘वी वान्ट टु गो ब्यााक होम’ प्ले कार्ड बोकेर निषेधित क्षेत्र तोडी सिंहदरबारतर्फ आएका थिए । “उनीहरु निषेधित क्षेत्रतर्फ आउन थालेपछि हामीले रोक्यौँ तर उनीहरु नमानेर सिंहदरबारसम्म आए”, उनले भने, “सिंहदरबार आएर पनि हामीमाथि आक्रमण गरेपछि हामीले तिनीहरुलाई नियन्त्रण लिएका हौँ ।”
उनीहरुले प्रहरीको लाठी खोसेर तिनलाई नै हिर्काएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रहरीले पनि उनीहरुमाथि लाठी हानेको थियो । लाठीबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतको टाउकामा चोट लागेको हो ।
प्रहरी निरीक्षक पौडेलका अनुसार बस्नेतसहित नेपाल प्रहरीका पाँच र उनीहरुतर्फ ६ घाइते भएका छन् । पक्राउ गरी तिनीहरुलाई भुकृटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको उनले जानकारी दिए । प्रहरीले भद्रकालीबाट नै प्रवेश गर्न नदिए पनि उनीहरु ठेलमठेल गर्दै सिंहदरबार पुगेका थिए । पर्यटक राहदानीमा घुम्न आएका ती चिनियाँ ठमेलबाट रानीपोखरी, रत्नपार्क हुँदै सिंहदरबारतर्फको निषेधित क्षेत्रतर्फ आएका हुन् ।
उनीहरुले यसअघि पनि स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्ने भन्दै चिनिया दूतावाससँग आग्रह गरेका थिए भने पर्यटन वोर्डमा समेत पुगेका थिए ।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५६ हजार नाघ्यो
नयाँ दिल्ली,मे ८
भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमितको संख्या शुक्रबारसम्म ५६ हजार ३४२ जना पुगेको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार बिहानको तथ्यांक अनुसार यस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ८८६ जना पुगेको छ ।
संक्रमणबाट निको भएका विरामीको संख्या १६ हजा ५३९ जना रहेको पनि सो मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतमा शुक्रबार बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार हाल यो रोगका ३७ हजार ९१६ जना संक्रमितहरु अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रका नागरिक संक्रमित भएका छन् । यहाँमात्र १८ हजार १२० नागरिक कोरोना संक्रमित रहेका छन् । महाराष्ट्रपछि गुजरात दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यहाँ ७ हजार १३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको छ । दिल्लीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ५ हजार ९८० जना विरामी छन्।
कोराना भाइरसको (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएपछि भारत सरकारले देशव्यापी लकडाउनलाई थप दुइ साताको लागि लम्ब्याएको छ । भारतले शुक्रबार मे ४ देखि लागू हुने गरी थप दुइ साताको लागि तेस्रो चरणको लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतमा पहिलो चरणको लकडाउन २४ मार्चमा लगाइएको थियो । दोस्रो लकडाउन १५ अप्रिलमा शुरु भएको थियो । दोस्रो लकडाउन मे ३ मा सकिदै थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभरी बढ्दै गएपछि दोस्रो लकडाउन नसकिदै तेस्रो लकडाउन मे १७ सम्मको लागि घोषणा गरिएको थियो ।––एएनआई/रासस
कोरोनाबाट मृत्यु भएका प्रहरीका परिवारलाई एक करोड क्षतिपूर्ति : मुख्यमन्त्री केजरीवाल
नयाँ दिल्ली,मे ७
भारतको नयाँ दिल्ली प्रदेशले कोरोना भाइरसविरुद्ध काम गरिरहेका समय मृत्यु भएका प्रहरीको परिवारलाई एक करोड क्षतिपुर्ति दिने घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईँका क्रममा निधन भएका अमितको परिवारलाई एक करोड क्षतिपुर्ति दिने घोषणा गरेको हो ।
नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले हिन्दी भाषामा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै अमितले आफ्नो जीवनको समेत प्रवाह नगरी निरन्तर कोरोना विरुद्धको लडाईमा सक्रिय भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन् ,“कामको सिलसिलामा उहाँलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण भयो र दुर्भाग्यबस उहाँले हामीलाई छाडेर जानुभयो । उहाँको योगदानलाई म सलाम गर्दछु र आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु ।”
मुख्यमन्त्री केजरीवालले उनको योगदान र लगावको उच्च मुल्यांकन गर्दै उनको परिवारलाई एक करोड रुपैयाको क्षतिपुर्ति प्रदान गर्ने ट्वीटरबाटै घोषणा गरेका छन् । ––एएनआई / रासस
एक महिना बढी भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेर नेपाल फर्केकाहरु खुसी भएका छन् । कोरोनाको त्रासकाबीच जन्मभूमिमा आउन पाउँदा निकै खुसी लागेको बैतडी पुर्चौंडी नगरपालिका–८ का उत्तम बोहराले बताए । विदेशी भूमिको क्वारेन्टाइनमा बस्न निकै समस्या भएका बेला स्वदेश फर्कन पाउँदा आफूहरु हर्षित भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने,“विपत्तिको बेला स्वदेश फर्कन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ ।” भारत र नेपाल दुवै देशमा लकडाउन भएपछि भारतीय सीमा क्षेत्रमा हजारौँ नेपाली भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । उनीहरुलाई बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्काइएको हो ।
स्वदेश फर्कन पाउँदा खुसी लागेको डिलाशैनी गाउँपालिका–६ रमेशराम ओडले बताए । मातृभूमिमा पाइला टेक्न पाउँदा निकै खुसी लागेको र आफूहरुलाई स्वदेश ल्याउन पहल गर्ने सबैलाई उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । बैतडीको पुर्चौैंडी नगरपालिका–८ का वीरेन्द्र पाठकले भने, “विदेशीभूमिमा बस्नुभन्दा स्वदेशको क्वारेन्टाइनमा बस्नु धेरै राम्रो छ ।”
अहिलेसम्म सिगास गाउँपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, सुर्नया गाउँपालिका र दशरथचन्द नगरपालिकामा क्वारेन्टाइन अनुगमन गरिएको क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए । उनले भने, “क्वारेन्टाइन कार्य्विधिअनुसार पालिकाहरुले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका र अपुग भएका ठाउँमा सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ”।
दशरथचन्द नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले समितिले सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ भने अन्य पालिकाका क्वारेन्टाइन राम्रा रहेको बताइएको छ । गत बिहीबार सीमा नाका झुलाघाट हुँदै एक हजार २९९ नागरिक स्वदेश फर्किएका थिए ।–रासस
Two Indian nationals among three arrested with yarsagumba worth 8 million
Nepal police arrested three persons including two Indian nationals along with yarsagumba,aunique caterpillar-fungus fusion (Cordyceps Sinensis) , worth Rs 8 million.
Acting onatip-off,apolice team deployed from Metropolitan Police Sector, Naagdhunga arrested them with 4.113 kg yarsagumba. this afternoon.
Police said the yarsagumba was seized fromacar with Indian registration number, UK 04 TB 1967, they were traveling in.
The arrested are Indian nationals Prem Singh, 32, and Harish Singh, 32, of the Indian state of Uttarakhand and Garje Singh Mahara, 48, of Darchula in Nepal.
They have been handed over to Division Forest Office, Hattisar for further action.
Yarsagumba, also known as Himalayan Viagra, is found in the highlands of Nepal
भिडियो लिंकबाट ओलीलाइ सम्बोधन गर्दै के भने मोदीले?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारतबीच विश्वासको सम्बन्ध पक्का भएको बताएका छन् । भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको हेटौडा नजिकैको अमलेखगन्ज सम्म तयार पारिएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको भिडियो लिंकबाट रिमोट उदघाटनपछि प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीलाइ सम्बोधन गर्दै दिएको भिडियो सन्देशमा उनले दुइ मुलुकबीच विश्वासको आधार पक्का भएको बताएका छन् । उनले द्धिपक्षिय परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गराउनेमा दुवै मुलुकका उच्च राजनीतिक तहले लिएको निर्णयको परिणाम सामुन्ने देखिएको भन्दै मोदीले भने, ‘पछिल्लो केहि वर्षमा हामीबीच उच्च राजनीतिक तहमा अभूतपूर्व निकटता आएको छ र नियमित सम्पर्कमा बसेका छौं । पछिल्ला डेढ वर्षमा हामीले चार पटक भेट गरयौं । यो भेटघाटले आपसी विश्वास पक्का भएको छ र परस्पर हितको आधारमा हाम्रो साझेदारी बलियो भएको छ ।’
उनले नेपालको प्राथमिकता अनुसारको विकासको मोडेलमा भारत सरकारको प्रतिवद्धता पनि पून दोहरयाएका छन् । ‘मलाइ आशा छ कि हाम्रो भागीदारीलाइ अझ व्यापक बनाउदै विविध क्षेत्रमा आफनो साझेदारीलाइ थप गहिरो बनाउन द्रुत गतिमा अगाडि बढनेछौं । नेपालको प्राथमिकता अनुसार विकासमा सहयोगकालागि भारत सरकारको प्रतिवद्धता म पून एक पटक दोहराउन चाहन्छु,’ मोदीले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तम स्वास्थ्यको कामना पनि गरे । ओली दिएको नेपाल भ्रमणकोलागि निमन्त्रणा आफ्नोलागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै चाडै नै नेपाल आउन इच्छुक रहेको समेत बताए । उनले भने, म सधै तपाईैको उत्तम स्वास्थ्य,अभुतपूर्व सक्रियता र भारत नेपाल सम्बन्धलाइ जोडनकालागि हर प्रकारले धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु । तपाइले मलाइ पून एक पटक नेपाल आउनकालािग दिनुभएको निमन्त्रणलाइ महत्वपूर्ण मान्दछु । तपाईहरुबीच र प्रकृतिको काखमा आउन मेरो पनि इच्छा छ ।’
अरु के के भने प्रधानमन्त्री मोदीले ? प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो लिंकबाट दिएको भाषणको बुँदागत सार
 नेपालमा हाम्रो द्धिपक्षिय साझेदारीको परियोजनाको भिडियो लिंकको माध्यमद्धारा रिमोट उदघाटन गर्न पाउँदा मलाइ अत्यन्त खुशी लागको छ । २०१९मा तपाइको भारत यात्राको अवसरमा सम्पन्न परियोजनाको चाँडो उदघाटन गर्ने सहमतिमा हामी पुगेका थियौं । मलाइ खुशी लागेको छ हाम्रो संयुक्त प्रयासले हाम्रा द्धिपक्षिय परियोजनाले प्रगति गरेका छन् । आज हामी मोतीहारी अमलेखगन्ज पाइपलाइनको संयुक्त उदघाटनमा भाग लिइरहेका छौं ।
 भारत र नेपालको बीच सदियौं पुरानो पारिवारिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध छ । यो जन जनबीचको सम्बन्ध हाम्रो द्धिपक्षिय परियोजनाको आधार हो । पछिल्लो केहि वर्षमा हामीबीच उच्च राजनीतिक तहमा अभूतपूर्व निकटता आएको छ र नियमित सम्पर्कमा बसेका छौं । पछिल्ला डेढ वर्षमा हामीले चार पटक भेट गरयौं । यो भेटघाटले आपसी विश्वास पक्का भएको छ र परस्पर हितको आधारमा हाम्रो साझेदारी बलियो भएको छ । विकासकालागि हाम्रो साझेदारीलाइ थप सक्रिय बनाउन र नयाँ नयाँ क्षेत्रमा सहयोगलाइ अझ बढाउन हामीले नयाँ अवसरको लाभ पनि उठाएका छौं ।
 हाम्रो संयुक्त प्रयासले हाम्रा जनताको विकास होस र उनीहरुलाइ फाइदा पुगोस हाम्रो चाहना हो । त्यसैले समयमै परियोजना सम्पन्न गराउनु दुवै सरकारको प्राथमिकता बनेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले महत्वपूर्ण द्धिपक्षिय परियोजना सम्पन्न गरेका छौं । कैंयो अन्य प्रयासहरुको परिणाम हामीले छिटो प्राप्त गरेका छौं ।
 अघिल्लो वर्ष हामीले संयुक्त रुपमा पशुपतिनाथ धर्मशाला र आइसिपी बीरगंजको उदघाटन गरेका थियौं । मोतीहारी अमलेखगन्ज पाइपलाइनको ग्राउण्ड बं्रेक्रिग पनि अघिल्लो वर्ष नै भएको थियो । यो एकदकै संतोषको विषय हो ।
 दक्षिण एशियाली क्षेत्रको पहिलो क्रस बोर्डर पाइपलाइन निर्धारित समयमा पुरा भएको छ । जति अपेक्षा गरिएके थियो त्यसको आधासमय भन्दा अगाडि नै पुरा भएको छ । यसको श्रेय तपाइको नेतृत्वलाइ , नेपाल सरकारको सहयोग र हाम्रो संयुक्त प्रयासलाइ जान्छ ।
 यो पाइपलाइनबाट प्रत्येक वर्ष २ लाख मेट्रिक टनको क्लिन पेट्रोलियम पदार्थ सुपथ मूल्यमा नेपालको जनतालाइ प्राप्त हुनेछ । उदघाटनसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम गर्ने घोषणा गर्नुभयो मूल्य कम गर्ने घोषणा गरिदिनुभयो । यो नेपाली जनताको भलाइकालागि भएको हो । नेपालको जनताको भलाइको यो कार्यमा हामीलाइ पनि साक्षी बन्ने अवसर पायौं यो आफैमा ठूलो सन्तोषको विषय हो ।
 २०१५को विनाशकारी भुकम्पपछि जब नेपालको पूननिर्माणको जिम्मा लिएका थियौ । भारतले छिमेकी र निकट मित्रका नाताले सहयोगको हाथ अगाडि बढायो । मलाइ खुशी छ कि नेपालको गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा आपसी सहयोगले पून घर बसेको छ । तपाईले यसबारे निकै गर्वका साथ उल्लेख गरिदिनुभयो त्यसकोलागि म तपाइप्रति आभारी छु । यसको कारण आम जनताले घर पाएका छन् । आशा गर्छु कि यो परियोजनाको संयुक्त उदघाटन गर्ने सौभाग्य पनि छिटै नै प्राप्त गर्नेछु ।
 हामीले आफ्नो साझेदारी लाइ थप बढाउनकालागि एक महत्वकांक्षी एजेन्डा निर्धारित गरेका छौं । मलाइ खुशी छ कि हामी आफ्ना सहयोगका सबै क्षेत्रमा संतोषजनक रुपमा प्रगति गरिहरेका छौं । हाम्रा विदेशमन्त्रीहरुले काठमाडौं भर्खरै सम्पन्न बैठकमा परियोजनाहरुको प्रगतिको बारेमा छलफल गरेका छन् । मलाइ आशा छ कि हाम्रो भागीदारीलाइ अझ व्यापक बनाउदै विविध क्षेत्रमा आफनो साझेदारीलाइ थप गहिरो बनाउन द्रुत गतिमा अगाडि बढनेछौं ।
 नेपालको प्राथमिकता अनुसार विकासमा सहयोगकालागि भारत सरकारको प्रतिवद्धता म पून एक पटक दोहराउन चाहन्छु । तपाइले यस महत्वपूर्ण कार्यकालागि भिडियो लिंकको माध्यमबाट जोडनकालागि समय निकाल्नुभयो मलाइ निकै खुशी लागेको छ।
 म सधै तपाईैको उत्तम स्वास्थ्य अभुतपूर्व सक्रियता र भारत नेपाल सम्बन्धलाइ जोडनकालागि हर प्रकारले म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु । तपाइले मलाइ पून एक पटक नेपाल आउनकालािग दिनभएको निमन्त्रणलाइ महत्वपूर्ण मान्दछु । मेरो पनि इच्छा छ तपाइहरुबीच र प्रकृतिको काखमा आउन ।
माेदीकाे सम्बाेधनकाे भिडियाे लिंक